Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iOS sanadkan Wararka IPhone
Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iOS sanadkan
Shaki la'aan waa mid ka mid ah saacadaha in qeexitaannada, naqshadeynta iyo qalabka ay ku jiraan heerka Apple Watch. Samsung Gear S2 waa sharadka weyn ee Samsung ee saacadaha casriga ah sannadkan, tanina waxaa lagu muujiyey xaqiiqda ah in Samsung ay ka tanaasushay xayiraadihii ay saartay noocyadii hore ee ahaa inay kaliya la jaan qaadi karto astaantooda. Taa baddalkeeda sumadda Kuuriya ayaa go'aansatay in Gear S2 ay la shaqeyn doonto taleefannada casriga ah ee kale ee Android, iyo hadda waxay hadda ku dhawaaqday CES 2016 in sanadkaan 2016 sidoo kale la jaan qaadi doono macruufka.
Samsung ma aysan siinin xilli cayiman oo ay ku habboonaan doonaan iPhone-ku iman doono. Waxay u badan tahay, sida Google ay ku sameysay aaladaha Android Wear, wey sameyn doontaa iyada oo loo marayo barnaamij ku habboon iOS-ka kaas oo ka dhigaya saacadda oo lagu lammaaneeyey laguna adeegsaday taleefannada casriga ah ee Apple. Xusuusnow in Gear S2 uusan lahayn Android Wear, laakiin uu adeegsado nidaamka qalliinka Samsung, Tizen, taas oo ka dhigaysa mid xitaa ka soo jiidasho badan saacadaha Google. Naqshaddiisa wareegsan waxaa sidoo kale lagu kaabayaa xakamaynta jireed ee Samsung soo bandhigtay ka dib markay aragtay guusha taajka Apple Watch. Wareegga wareega ee Samsung Gear S2 wuu wareegayaa, sida saacadaha caadiga ah ee quusitaanka, wuxuuna u adeegaa inuu ku dhex wareego menusyada saacadaha iyo wareejinta.
In kasta oo ay cadaw xun yihiin, haddana waa iska cadahay in Samsung aysan iloobin malaayiinta isticmaale ee suurtagalka ah ee ay ku heli laheyd iyadoo ku keeneysa smartwatch-keeda macruufka, qaar badan oo ka mid ah ayaa laga yaabaa inaysan soo jiidan naqshadda Apple Watch waxaad ku arki kartaa saacadda Samsung beddel aad u fiican kan Apple. Sida iska cad waa inaan aragnaa waxa ka xadidan barnaamijkan ku saabsan iOS, laga yaabee inuu aad ula mid yahay kuwa Android Wear uu haatan haysto, sidaan kugu tusinay Moto 360 tijaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Samsung Gear S2 wuxuu la jaan qaadayaa iOS sanadkan
Antonio Municio dijo
Ku jawaab Antonio Municio
Ephraim Echevarria dijo
Waxay ahayd waqti
Jawaab Efrain Echevarria
Gudaha iyo banaanka qalinka Apple iyo shan iyo tobanka semiconductors
Apple Pay waxay ku darsataa taageerada 58 hay'ad maaliyadeed oo dheeri ah